Mas'uuliyiintan ka socota dalalka dariska iyo saaxiibka la ah Soomaaliya ayaa waxaa kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho xubno uu ka mid yahay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta si rasmi ah ula wareegaya xilka madaxnimo ee Soomaaliya.
Dhaqdhaqaaqa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa hakad la geliyay maanta iyadoo ammaanka caasimaddana aad loo adkeeyay, waxaana munaasabadda ay noqonaysaa tii ugu horreysay oo lagu qabto Soomaaliya.
Sidoo kale, waxaa munaasabadda ka qaybgalaya, wufuud ka kala socota ururrada Jaamacadda Carabta, Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay, waxaana wufuudda ku sugan Muqdisho ka mid ah wafdiyo heer wasiir ah oo ka socda dalalka Uganda iyo Qatar.
Ciidamada bambeyda ayaa ku sugan garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, kuwaasoo garaacaya muusiga calamada dalalka soo gaaraya Muqdisho ee ka caleemo-saarka ka qaybgalaya, iyadoo la adkeeyay ammaanka goobta uu shirku ka dhacayo iyo waddooyinka ku dhow-dhow.
Caleemo-saarkan ayaa wuxuu noqonayaa kii ugu horreeyay oo ka dhaca Muqdisho tan iyo sannadkii 1967-kii markaasoo madaxweynihii la doortay ee xilligaas C/rashiid Cali Sharma'arke uu xilka kala wareegayay madaxweynihii uu doorashada kaga adkaaday Aadan Cabdulle Cismaan.
Wufuudda soo gaaraysa Muqdisho ayaa waxaa weli soo gaarayaan garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, halkaasoo ay ku sugan yihiin madaxda dowladda, waxaana sidoo kale munaasabadda ka qaybgalaya fannaaniinta Qaranka dalka Jabuuti ee deegaan oo shalay Muqdisho soo gaaray.